ယူဂိုဆလားဗီးယား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ယူဂိုဆလားဗီးယား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
[[File:ဖိုင်:Yugoslav Football Federation 1990.png|100px|Shirt badge/Association crest]]
Brazilians of Europe
Dragan Džajić (၈၅)
Stjepan Bobek (၃၈)
အနိမ့်ဆုံး Elo အဆင့်
(၁၉၂၇ ဧပြီ ၁၀)
ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယား 7–0 Kingdom SCS
(Antwerp, Belgium; 28 August 1920)[မှတ်စု ၁]
as SFR of Yugoslavia
ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယား 0–2 ယူဂိုဆလားဗီးယား
(Prague, Czechoslovakia;9May 1945)
ယူဂိုဆလားဗီးယား 10–0 ဗင်နီဇွဲလား
(Curitiba, Brazil; 14 June 1972)
as Kingdom of Yugoslavia
Kingdom of Yugoslavia 9–3 ပိုလန်
(Belgrade, Kingdom of Yugoslavia;6September 1936)
Kingdom of Yugoslavia 7–1 ဂရိ
(Belgrade, Kingdom of Yugoslavia; 26 June 1932)
(Antwerp, Belgium; 28 August 1920)
ဥရုဂွေး 7–0 Kingdom SCS
(Paris, France; 26 May 1924)
(Prague, Czechoslovakia; 28 October 1925)
ဩစတြီးယား 7–2 ယူဂိုဆလားဗီးယား
(Vienna, Austria; 8 October 1950)
စကော့တလန် 6–1 ယူဂိုဆလားဗီးယား
(Glasgow, Scotland; 12 September 1984)
ဘူဂေးရီးယား 6–1 ယူဂိုဆလားဗီးယား
(Sofia, Bulgaria;6November 1966)
ဒိန်းမတ် 5–0 ယူဂိုဆလားဗီးယား
(Lyon, France; 16 June 1984)
8[မှတ်စု ၂] (First in 1930)
Fourth place (1930, 1962)
ယူအေးဖာ ဥရောပဖလား ပြိုင်ပွဲ
၄[မှတ်စု ၂] (First in ၁၉၆၀)
ဒုတိယနေရာ (၁၉၆၀၊ ၁၉၆၈)
1960 France Team
1968 Italy Team
1960 Rome Team
1956 Melbourne Team
1934–35 Greece Team
1935 Bulgaria Team
1971 İzmir Team
ယူဂိုဆလားဗီးယား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း[မှတ်စု ၃] သည် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည်။ စစ်ကြိုခေတ်တွင် ယူဂိုဆလားဗီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံနှင့် စစ်ပြီးခေတ်တွင် အက်စ်အက်ဖ်အာ ယူဂိုဆလားဗီးယား (SFR Yugoslavia) နိုင်ငံတို့ကို အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်စားပြု၍ ကိုယ်စားပြုခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဆာ့ဘ်၊ ခရို့ယ နှင့် စလိုဗီးန် ဘုရင့်နိုင်ငံ (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) (၁၉၁၈-၁၉၂၉)
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စု (၁၉၄၃-၁၉၄၅)
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဖက်ဒရယ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (၁၉၄၅-၁၉၆၃)
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဆိုရှယ်လစ်ဖက်ဒရယ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (၁၉၆၃-၁၉၉၂)
နိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ယူဂိုဆလားဗီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ၏ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသင်းကို ပြိုင်ပွဲများမှ ယာယီဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင် ထိုပိတ်ပင်မှုများဖယ်ရှားပေးခဲ့၍ ယူဂိုဆလားဗီးယား ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းအဖြစ် ဆက်ခံယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ဖီဖာနှင့် ယူအေးဖာနယ်ပယ်၌ ဆားဗီးယား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းက ဆက်ခံခဲ့ပြီး ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ဆက်ခံသည့်အသင်းအဖြစ် ထိုအဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်လုံးက အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ (ဆားဗီးယားနှင့် မွန်တီနီဂရိုး)
↑ First international as SFRY: ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယား 0–2 ယူဂိုဆလားဗီးယား
↑ ၂.၀ ၂.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named see-scg
↑ ဆားဘီးယား: Фудбалска репрезентација Југославије, romanized: Fudbalska reprezentacija Jugoslavije; ခရိုအေးရှား: Jugoslavenska nogometna reprezentacija; Slovene: Jugoslovanska nogometna reprezentanca; တမ်းပလိတ်:Lang-mk
↑ A farewell to Yugoslavia Archived7July 2017 at the Wayback Machine. openDemocracy.net. Dejan Djokic; 10 April 2002
↑ Jugoslavija – Venecuela 10–0 (in sh) (14 October 2009)။
↑ 1974 FIFA World Cup Germany ™ - Matches - Yugoslavia-Zaire။
↑ History Archived 27 December 2011 at the Wayback Machine. at FSS official website, Retrieved4October 2012 (in ဆားဘီးယား)
↑ News: Serbia Archived 25 September 2017 at the Wayback Machine. at UEFA official website, published 1 January 2011, Retrieved4October 2012
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူဂိုဆလားဗီးယား_အမျိုးသား_ဘောလုံးအသင်း&oldid=673855" မှ ရယူရန်
Sloveneဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဆားဘီးယားဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ (sr)
ဆားဘီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ခရိုအေးရှားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ကျိုးပျက်နေသော ဖိုင်လင့်များပါသည့် စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။